The Ab Presents Nepal » धनकुटाका ३२ वर्षीय आकाश पानीजहाज क्याप्टेन मात्रै बनेनन्, अहिले पानीजहाजको मालिक पनि!
धनकुटाका ३२ वर्षीय आकाश पानीजहाज क्याप्टेन मात्रै बनेनन्, अहिले पानीजहाजको मालिक पनि!
आकाश एकैपटक सेतो सर्ट, कालो पाइन्ट र क्याप्टेनको टोपी लगाउन दुबई छिरेका थिएनन् । सन् २००६ तिरको कुरा हो । भर्खरै १२ कक्षा पास गरेका थिए । हातमा स्काभेटर चलाउने सीप मात्रै थियो । रिभर ओभरसिज म्यानपावरलाई ६५ हजार रुपैयाँ बुझाएर कतारमा स्काभेटर चलाउन उडे । सम्झौता गरेअनुसार कम्पनीले स्काभेटर चलाउन दिएन । नीलो डांग्री (पोसाक) दिएर लेबरमा बेल्चा हान्न पठाए । कतारी कम्पनीमा ६ महिनाभन्दा बढी बेल्चा हान्नुपरेन । म अंग्रजी राम्रैसँग बोल्थें । कम्पनीले मलाई साइडमा पठाएन । अफिसभित्रै सहयोगी बनायो उनले भने अफिसभित्र छिरेपछि काम सिक्न थालें । मलाई खरिद गर्ने विभागमा राखियो । कम्पनी छोड्ने बेलासम्म हर्ताकर्ता भइसकेका थिएँ ।
कतार दुई वर्षसम्म टिके । सवारी चालक अनुमति बनाइसकेका थिए । नेपाल फर्के । नेपाल फर्केको दुई महिनाभित्रै दुबई गए । ‘दुबईमा आफन्त थिए । के भिसामा आउने भनेर सोधे । उनीहरूले कतारी लाइसेन्स भए ड्राइभिङ काममा आइज । सजिलो हुन्छ उनले भने, ‘ड्राइभिङ काममै गए । संयोगले उनी दुबई मरिना एच क्लबमै गाडी चलाउन पुगे ।
उनले पहिलोपटक पानीजहाज मरिनामै गएर देखेका थिए । सेतो जहाज पानीमा सरर चलेको देख्दा मन लोभियो । त्यतिखेर आकाशलाई लाग्यो अब सडकमा गाडी होइन, पानीमा जहाज कुदाउने हो ।
के भए जहाज चलाउन पाइन्छ ?
मरिना क्लबमा आउनेहरूसँग बुझ्थे  एउटाले भनिदिए, ६ महिने कोर्स छ । त्यो कोर्समा उत्तीर्ण भए पाइन्छ ।
ड्युटी साँझ ६ बजेदेखि बिहान ३ बजेसम्म हुन्थ्यो । कलेजको समय ९ देखि ६ बजेसम्म । काम सकिनासाथ कलेजका लागि तयार हुन्थे । कैयांै दिनसम्म त म कोठामा पनि गइनँ । गाडी नै मेरा लागि कोठाजस्तो हुन्थ्यो उनले भने मसँगै आउने साथीहरू अहिले पनि मेरो त्यतिखेरको मिहिनेतलाई सम्झन्छन् ।अहिले सम्झँदा आफंैलाई लाग्छ । मैले त्यो ६ महिना कसरी बिताउन सकें ?
खाने, बस्ने र सुत्ने कुनै ठेगान थिएन । मुस्किलले दिनमा दुई/तीन घण्टा सुत्थें । कलेजको शुल्क ३५ हजार दिराम (१० लाख ५० हजार रुपैयाँ) थियो । कलेजलाई तिर्ने पैसा भने सबै तलबबाटै जुटाउने ।१५ सय दिराम तलब आउँथ्यो । कहिलेकाहीँ टिप्स पाउँथें उनले भने मेरो घरमा पैसा माग्ने कोही छैन ।
६ महिनाको कोर्स पूरा गरेपछि उनले तुरुन्तै जहाज चलाउन पाएका थिएनन् । हातमा सीप छ तर चलाउन जहाज छैन । ‘केन्ट भन्ने एकजना चिनेको थिएँ । उसको मरिनामा जहाज थियो । बिदाको दिन मलाई आफ्नो क्रूर मेम्बर (हेल्पर) बनाएर लग्न थाले । ऊ बस्थे । म जहाज चलाएर हिँड्थें,’ उनले भने, ‘एक दिनको ५ सय दिराम दिन्थें ।जहाज चढ्न आउने सामान्य खालको वर्ग हँुदैन ।एक दिनका लागि ५० हजार दिराम (१५ लाख रुपैयाँ) खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘मैले जहाज चलाउन थालेपछि बढीजसो जहाज मालिकसँग सम्बन्ध हुन गयो ।
उनीसँगको सहयात्रा दुई वर्षसम्म निरन्तर भयो । मजेनको ११ वटा जहाज थियो । चार जना मात्रै क्याप्टेन ।चार जनाले ११ वटा जहाजको व्यवस्थापन गर्नुपथ्र्यो । एउटा जहाज लिएर गयो । फर्केर आउँदा अर्को जहाजमा ग्राहक प्रतीक्षामा बसिरहेका हुन्थे उनले भने धेरै प्रेसर भयो । धान्न गाह्रो भयो ।त्यही बेला एक जना बेल्जियम एउटा प्रस्ताव लिएर आए । उनी यूएईका ठूला व्यापारी थिए ।
म एउटा प्राइभेट जहाज लिँदै छु । यसको क्याप्टेन तिमीलाई बनाउँछु । तर तिमीलाई महिनावारी तलब दिन्न । २५ प्रतिशत हिस्सा दिन्छु । मलाई चाहेको बेला मसँग हुनुपर्छ । बाँकी तिमीले यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ उनको प्रस्ताव थियो ।
जहाजको मूल्य कम्तीमा ३० लाख दिराम (झन्डै ९ करोड रुपैयाँ) पर्छ । त्यसको कम्तीमा २ करोड २५ लाख रुपैयाँ आकाशले जुटाउनुपर्दथ्यो । जहाज चलाउँदा तलबभन्दा टिप्स आउँथ्यो । कहिले त एकै जनाले पनि १० हजार दिराम (३ लाख रुपैयाँ) सम्म दिन्थ्यो । मैले कमाएको पैसा सबै यूएईमा राखेको थिएँ उनले भने उनले राखेको प्रस्ताव स्वीकार गर्नसहज भयो ।